Madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay Ra’iisul wasaaraha Cuusb ee Somalia oo muddo laga sugayay!!! | Somali - Diaspora
Madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay Ra’iisul wasaaraha Cuusb ee Somalia oo muddo laga sugayay!!!
October 06 2012 – Goordhaw Xaflad si heer sare loo soo laguna Qabtay Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya Wuxuuna Madxaweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaga Dhawaaqay Shaqsiga noqonaya R/Wasaaraha Soomaaliya 4-ta Sanno ee soo socota.
Madaxweynaha ayaana ku dhawaaqay C/qaadir Faarax Garaad oo ku magac dheer (Saacid ) in uu yahay Raizul Wasaaraha Soomaaaliya 4-ta Sano ee soo socota loogana fadhiyo isna in uu soo dhiso Xukuumad tayo leh oo wax badan Dalka ka qabata.
Masuulkan Goordhaw loo Magacaabay R/Wasaaraaha Soomaaliya ayaa saacadhiihi lasoo dhaafay lasaadaalinayay in uu noqon doono ninka noqona Raizul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya sidii aad kaga bogateen Wararkeenii hore een daabacnay.
R/Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya ayaa hada kusugan Xarunta Mdaxatooyada ee goordhaw lagu Magacaabay ,waxaana Galabta Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada kasoo kaxeeyeen Hotelkii uu ka dagnaa Magaalada Muqdisho iyadoona la filayo in uu si rasmi ah Dhawaan u dago Xarunta Madxatooyada ee Villa Soomaaliya.
C/qaadir Faarax Garaad oo ku magac dheer (Saacid )ayaa waxaa uu ku dhashay duleedka Caabud waaq, waxaana uu ka soo jeedaa beesha Mareexaan, reer Diini, ( reer dalal), waxayna qoys ahaan aad isu dhowyihiin R/wasaarihii hore Maxamed C/laahi Farmaajo ,kwaana ninka Qaba Xildhibaanad Caasha Xaaji Cilmi.
Saacid Faarax Garaad, wuxuu 21kii sano ee lasoo dhaafey daganaa magalaada Nairobi halkaas oo uu ku lahaa ganacsi balaaran, isagoo sidoo kalena maamuli jirey NGO la magac baxay Saacid oo qandaraasyo ka qaadan jirey xafiisyada hay’adaha UNka ee fadhigoodu yahay Nairobi.
Mr. Garaad waxaa una ka baxay Jaamacadii Umadda, wuxuuna ku hadlaa luuqadaha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waxaa la tilmamayaa inuu yahay Saacid nin xiriir dhow la leh labada dowladood ee ugu saameynta badan xiligan arimaha Soomaaliya faraha kula jira ee Itoobiya iyo kenya, meeshana lagama saari karo in ay dowr wayn ku lahayeen soo magacaabistiisa.
Muqdisho (Moment Media Group) Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa goordhow ku dhawaaqay wasiirka koowaad ee xukuumada dalka hogaamin doonta mudada uu soo socota.
Madaxweynaha oo gordhow shir jaraa’id ka hadlaygudaha madaxtooyada ayaa ku dhawaaqay in“Cabdi Faarax Shirdoon Garaad” oo ku magacdheer “Saacid” uu yahay raysul wasaaraha dalka.
Madaxweynuhu wuxuu u rajeeyay raysul wasaaraha cusub inuu ku guuleysto dhismaha xukuumad tayo leh uuna dalka ka samatabixiyo marxalad adag ee uu ku jiro.
Cabdi Faarax Shirdoon Garaad oo Si Rasmi ah Loogu Magacaabay Raysul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa xafladan lagu dhawaaqay raysul wasaarahagoobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Prof Maxamed Cismaan Jawaari iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka dalka.
Haddaba waa kuma raysul wasaaraha cusub? goordhow la soco Raxanreeb taariikhda raysul wasaare Shirdoon.
WariyahaMoment Media Group oo ku sugan madasha ayaa sheegaya inuu arkay nuqul ka mid ah wareegtada madaxweynaha oo uu ku qoran yahay in raysul wasaaraha cusub ee Soomaaliya loo magacaabayo“Cabdi Faarax Shirdoon” oo ku magacdheer Saacid.
Mid ka mid ah kalkaaliyaasha xafiiska madaxweynaha oo aan rabin in la magacaabo ayaa Moment Media Group u sheegay in wareegtadan ay tahay mida rasmiga ah ee madaxweynuhu ku magacaabayo wasiirka koowaad ee xukuumadda (inkastoo aan si rasmi ah weli loo shaacin).
Tirada golaha wasiirada cusub
Moment Media Group waxay kaloo ogaatay in tirada golaha wasiirada cusub ee dalka ay ka koobnaan doonaan 23 wasaaradood ooloo kala qeybin doono sida soo socora;-
– 5 wasaaradood beelaha Dir
– 5 wasaaradood beelaha Hawiye
– 5 Wasaaradood beelaha Daarood
– 5 wasaaradood beelaha Digil iyo Mirifle
– 3 Wasaaradood beesha Shanaad
Sida ilo wareedyada ay u sheegeen Moment Media Group, waxay kooxda ‘Dam Jadiid’ ee taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh ay qaadan doonaan illaa 11 wasaaradood oo ay ka mid yihiin;
1- Wasaaradad arimaha dibadda
2- Wasaaradda arimaha gudaha
3- Wasaaradda waxbarashada
4- Wasaaradda maaliyadda
Waxa kaloo jiri doono wasiir ku xigeeno iyo wasiiru dawlayaal ay yeelan doonaan kooxda ‘dam Jadiid’ ee sida weyn ugu wareegsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Marka laga tago 11-ka wasaaradood ee Dam Jadiid ay qaadanayaan, wuxuu raysul wasaaruhu madaxweynaha kala tashan doonaa tirada kale ee wasaaradaha soo haray.
Comment by somaliamomentum on October 6, 2012 4:06 pm
Muqdisho (Moment Media Group) Waxaa goordhow oo daqiiqado kaliya naga xigaan bilaabaneysa xaflad ballaaran oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku magacaabayo raysul wasaaraha cusub ee dalka iyadoo wariyaasha iyo marti sharaf kale ay haatan fadhiyaan hoolka shirarka ee xarunta Villa Soomaaliya.
Wariyaha Raxanreeb oo ku sugan madasha ayaa sheegaya inuu arkay nuqul ka mid ah wareegtada madaxweynaha oo uu ku qoran yahay in raysul wasaaraha cusub ee Soomaaliya loo magacaabayo “Cabdi Faarax Shirdoon” oo ku magacdheer Saacid.
Mid ka mid ah kalkaaliyaasha xafiiska madaxweynaha oo aan rabin in la magacaabo ayaa Raxanreeb u sheegay in wareegtadan ay tahay mida rasmiga ah ee madaxweynuhu ku magacaabayo wasiirka koowaad ee xukuumadda (inkastoo aan si rasmi ah weli loo shaacin).
Raxanreeb waxay kaloo ogaatay in tirada golaha wasiirada cusub ee dalka ay ka koobnaan doonaan 23 wasaaradood ooloo kala qeybin doono sida soo socora;-
Sida ilo wareedyada ay u sheegeen Raxanreeb, waxay kooxda ‘Dam Jadiid’ ee taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh ay qaadan doonaan illaa 11 wasaaradood oo ay ka mid yihiin;
Warad Furan oo ku socota Madaxweyne Xasan kana timid Somalia Diaspora Madaxweynaha oo R/wasaare Magacaabay